Fahafatesana hafahafa an-kalamanjana Tovolahy iray nitsirara teny Andravoahangy
Nisehoana fahafatesana hafahafa indray tetsy Andravoahangy omaly tolakandro, taorian’ilay roa lahy teny Anosibe tamin’ny herinandro lasa teo.
Tsy fantatra mazava izay antony nahafaty azy na aretina mitaiza na fahapoizinana ara-tsakafo na noho ny hanoanana … Nivoaka zavatra miloko fotsy ny vavany, izay mety hitarika ny sain’ny olona hieritreritra fa mety nahatelina poizina, saingy ny fitsirihana ataon’ny mpitsabo no afaka manamarina izany. Raha kely indrindra, dia tranga faninefany ity fahafatesana an-kalamanjana ity teto Antananarivo. Tsy fantatra mazava izay antony. Asa na misy ny fitsirihana sy fitiliana ataon’ny mpitsabo amin’izy ireny. Mifanandrify indrindra amin’ny fisiana valanaretina mahery vaika Coronavirus izay efa mamely firenena maro aty Afrika ihany koa izao ka mahalasa saina ihany. Sa mety ho pesta ? Tena mampihoron-koditra sy mahalasa saina ny toe-javatra miseho sy misesisesy tahaka izao ka asa na efa misy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana. Ny rehetra ihany koa dia tompon’andraikitra feno amin’ny fitandremana, ny fitandroana ny fahadiovana,…